शेक्सपियरको "म्याकबेथ" मा अपराध
by ली जमिइसन
खूनी खरगोश स्कटिश राजाको अनुयायीको एक अभिव्यक्ति हो
शेक्सपियरको सबैभन्दा प्रसिद्ध र डरलाग्दो त्रासदी मध्ये एक, "म्याकबेथ" ले ग्याम्मेन्स थान थ्यानको कथा बताउँछ, एक स्कटिश महाप्रबन्धक जसले तीनवटा चुच्चोबाट भविष्यवाणी गर्दछ कि उनी एक दिन राजा हुनेछन्। उनी र उनको पत्नी, लेडी म्याकबेथ, भविष्यवाणी पूरा गर्न हत्या राजा डन्कन र धेरै अन्य, तर म्याकबेथले आफ्ना दुष्ट कामहरूमा गल्ती र दबाबको सामना गरिरहेको छ।
अपराध मलबेन्टले चरित्रलाई सफा गर्दछ, जसले दर्शकहरूलाई कम से कम थोपा सहानुभूति दिन्छ।
उनको डान्सन उनको खेल मा रहन को पहिले र पछि उनको दोष को उद्घाटन, र यसको केहि यादगार दृश्यहरु लाई प्रदान गर्दछ। तिनीहरू निर्दोष र महत्वाकांक्षी छन्, तर तिनीहरूको अपराध र अनुयायी हो जुन जो म्याकबेथ र लेडी मैकबेथको अनुहार हो।
कसरी गिल्टले म्याकबेथलाई असर गर्छ र कसरी यो गर्दैन
म्याकबेथको अपराधले तिनलाई बिरामी प्राप्त गरेको पूर्णतालाई पूर्णतयाबाट रोक्न रोक्छ। खेलको सुरुवातमा, क्यारेक्टरले नायकको रूपमा वर्णन गरेको छ, र शेक्सपियरले हामीलाई सन्तुष्ट पार्छ कि म्याकबेथको नायक जो गुणहरू अझै पनि उपस्थित छन्, राजाको गहिरो क्षणमा पनि।
उदाहरणका लागि, म्याबोबेले बानको भूतले भ्रमण गरेको छ, जसमा तिनले आफ्नो गुप्त रक्षाको हत्या गरे। खेलको एक नजिकको पढाईले बताउँछ कि यो प्रदर्शन म्याबोथको अपराधको अवधारणा हो, किनकि उसले राजाको डंकनको हत्याको बारेमा सत्य बताउँछ।
मकबथको पछाडीको भावना स्पष्ट रूपले बलियो छैन कि उनीहरूलाई फेरि मारेर रोक्नदेखि रोक्न, तथापि, खेलको अर्को मुख्य विषयलाई ध्यान दिनुहोस्: दुई मुख्य क्यारेक्टरहरूमा नैतिकताको कमी।
हामी कसरी अरूलाई विश्वास गरिरहेको छ Macbeth र उनको पत्नीले अपराध व्यक्त गर्दछ, अझै अझै पनि आफ्नो खूनी वृद्धि को लागि जारी राखन मा सक्षम हुन सक्छ?
म्याकबेथमा स्मरणात्मक पर्दाहरूको गिल्ट
सायद म्याकबेथका दुई सर्वोत्कृष्ट ज्ञात दृश्यहरू डर वा अपराधको अर्थमा आधारित हुन्छन् जुन मध्य पात्रहरू सामना गर्छन्।
पहिलो प्रसिद्ध म्याकथले मक्काबथबाट सजिलै सुनाइएको छ, जहाँ उनले खूनी खरगोशको प्रशंसा गरेका छन्, यसको पूर्व र राजा राजा डन्कनको हत्या पछि धेरै अलौकिक पोर्टलहरूमा। म्याकबेथ अपराधको कारणले भरिएको छ कि उनीहरूलाई के हो भन्ने कुरा निश्चित छैन:
के यो एक खरगोश हो जुन मैले पहिले देखेको छु,
मेरो हातमा ह्यान्डल? आओ, मलाई चम्कने दो
म तिमीलाई छैन, र म अझै पनि तिमीलाई देख्छु।
तपाईं कला, घातक दृष्टि होइन, समझदार
दृष्टिको रूपमा महसुस गर्न? अथवा तिमी त
दिमागको खतरा, एक गलत सिर्जना,
गर्मीको दबाब दिमागबाट बढ्दै हुनुहुन्छ?
त्यसपछि निस्सन्देह, निर्णायक अधिनियम V दृश्य हो जहाँ लेडी म्याकबेथले आफ्नो हातबाट कल्पनात्मक रक्तचाप धोएर कोसिस गर्छ। ("बाहिर, बाहिर, हानिकारक ठाउँ!"), डन्कन, ब्यानोको, र लेडी म्याकडफको हत्यामा उनीहरूको भूमिका लुकाउँछिन्:
बाहिर, हानिकारक ठाउँ! बाहिर, म भन्छु! -एक, दुई। त्यसोभए 'कहिलेकाहीं' गर्न समय छ। नरक दुखी छ! -फाई, मेरो मालिक, फाई! एक सैनिक, र afeard? हामीलाई कुन कुरा चाहिन्छ डर लाग्छ जसले यो जान्छ, जब कसैले हाम्रो शक्तिलाई खातामा पुर्याउन सक्दैन? -यसैले बूढा मानिसलाई तिनमा यति रगत पर्थ्यो।
यो पागलपनमा उत्पत्तिको सुरुवात हो जसले अन्ततः लेडी म्याकथथलाई आफ्नै जीवन लिन उत्प्रेरित गर्दछ, किनकि उनी अपराधको भावनाबाट मुक्त हुन सक्दैनन्
कसरी म्याकबेथको लेडी म्याकबेथको गिफ्ट टिफर्स
लेडी म्याकबेथ आफ्नो पतिका कार्यहरू पछि ड्राइभिङ्ग बल हो।
वास्तवमा, यो तर्क थियो कि म्याकबेथको गल्तीको गहन भावनाले बताउँछ कि उनीहरूले उनको महत्वाकांक्षीहरूलाई लेडी म्याकबेथ बिना हत्या गरेकी उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिईन्।
मकबथको चेतनापूर्ण अपराधको विपरीत, लेडी म्याकबेथको दोषले अवचेतनतया आफ्नो सपनाको माध्यमबाट व्यक्त गरेको छ र उनको निद्राबाट बच्न सकिन्छ। यस प्रकार उनको अपराध प्रस्तुत गरेर, शेक्सपियर यो सुझाव हो कि हामी गल्तीबाट पछाडी भाग्नबाट बचाउन असक्षम छौं, कुनै पनि कुराले हामी कसरी सफा गर्न प्रयास गर्न सक्छौं।
Hamlet र बदला
'किंग लियर' अधिनियम 1: खोलने दृश्य को विश्लेषण
शेक्सपियरको "हेमलेट" मा प्रचलित सामाजिक र भावनात्मक विषयवस्तु
Hamlet क्यारेक्टर विश्लेषण
'रोमियो र जूलियट' पर्दे
'Hamlet' सारांश: के "Hamlet" मा के हुन्छ?
'Othello' अधिनियम2सारांश
Parinirvana: कसरि ऐतिहासिक बुद्ध निर्वाण दर्ज भएको छ
जापानबाट शीर्ष9एमएलबी प्लेयरहरू
सामाजिक कार्य वा परामर्श? कुन डिग्री छान्नु पर्छ?
चार्ल्स फीनन McKim, प्रभाव र वास्तुकला
ओजोन र ग्लोबल वार्मिंग
पवित्र हप्ता टाइमलाइन
Mabon मनाउन दस तरिका
ल्याटिनमा नामकरणीय प्रकरण
एसआईटी स्कोर प्रवेश गर्न शीर्ष मिशिगन कलेजहरू
लिनेस्टोन कलेज प्रवेश
जैज संगीत उपकरण
ईन्जिनियरिङ् मेजरहरूको लागि कलेज छात्रवृत्ति
बेईज प्रमेय परिभाषा र उदाहरणहरू
2004 यूएस ओपन: गोसेन्स आउटलुक मिकेलसन
कसरी जंगली र जंगली काम
महिला अधिकारहरूको फ्रेडरिक डगलस उद्धरण
माइक्रोसफ्ट अफिसको सुरक्षा चेतावनी सन्देश पट्टी असक्षम गर्दै
बॉलिंग बल कसरी गर्ने
ल्याप्टप कम्प्यूटरको इतिहास
हाइड्रोफोबिक परिभाषा र उदाहरणहरू
विश्वास समूहले ट्रिनिटी सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्छ
फाइनान्सियर रसेल सेज आक्रमण
50 भन्दा राम्रो रेप गीतहरू 2015